www.sapanasansar.com: झरी परिरहन्छ।
अलि सञ्चो नभएर आझ घरमै बसेकोछु। एक्लैछु। श्रीमति काममा गएकीछिन् र बच्चाहरु छिमेकी नेपाली साथीको घरमा खेल्न गएकाछन्।आज मौसम त्यति सफा छैन। कालो बादल पश्चिमतिरबाट ढाक्दै ल्याएको झ्यालबाट देखिन्छ। कुनै पनि बेला पानी दर्कन सक्छ। मिन्नेसोटाको मौसम, कुनै भर छैन।
बच्चाहरुले खुलै छोडेर गएको टिभी एकनासले कर्कश कराइरहेकोछ। दिक्क लाग्छ। टिभी बन्द गरिदिन्छु। नभन्दै पानी दर्किन्छ।झ्यालका खापाहरु बन्द गरिदिन्छु तर पर्दा भने खुलै राख्छु। मलाई किन किन पानी परेको हेर्न मन पर्छ। पानीका थोप्लाहरु जमीनमा एकनासले बज्रिरहेकाछन्। म नियाली रहेकोछु बाहिर वर्षातको नजारा। किन किन मन त्यसै रोमाञ्चित हुन्छ; तरङ्गित हुन्छ। मलाई लाग्छ, म पानीमा निथ्रुक्क भिज्दै हिंडिरहेकोछु।
“पानीमा किन भिज्दै हिंड्नु हुन्छ, एकछिन ओत लाग्नूस्” कतै एउटा नारी स्वर कानमा गुञ्जिन्छ। कतै सुनेको जस्तो, चिनेको जस्तो आवाज।
“हँ, म कहाँ पानीमा भिजेको छु र” म झस्किन्छु। “ म त आफ्नो घर भित्रै छु नि”
यो के भएको होला मलाई? त्यो कस्को आवाज मेरो कानमा प्रतिध्वनी भएको होला? सम्झने कोशीस गर्छु।म अतीतको गर्भमा समाहित हुन्छु।
२०४६ साल। राजाले दलहरुले दलहरु माथिको प्रतिबन्ध हटाएर प्रजातन्त्रको पूनर्श्थापना गरेको उपलक्ष्यमा निस्केको जुलुशमा हामी सबै स्कुलेहरु सहभागी भएर सदरमुकाम गएका थियौं। उनी पनि थिईन। उनी भन्नाले –नैनकला। म भन्दा एक तह तलको कक्षामा पढथिन्।सामान्य चिनजान थियो, तर बोलचाल थिएन। हेराहेर जरुर हुन्थ्यो तर मैले त्यो हेराइको कुनै अर्थ खोज्ने कोशीस् गरेको थिईन। जुलुशबाट फर्किदा बेस्सरी पानी परेको थियो र हामीहरु छिन्न भिन्न भएका थियौं। म रुझ्दै हिंडिरहेको थिएं।
“पानीमा किन भिज्दै हिंड्नु हुन्छ, एकछिन ओत लाग्नूस्”। एउटा घरको पालीमा आफैं ओत लागेर बसेकी रहिछिन् नैनकला। उनको आग्रह हो वा सल्लाह, जे होस् मैले सहजै स्विकार गरेको थिंए। खास चिनजान थिएन। बोल्ने कुरो पनि केही थिएन।
“कस्तो पानी परेको, हगी?”
“हो त नि”
सिमित औपचारिक सम्वाद भए। पानी रोकिने कुनै सुरसार थिएन। भिजेको कपालबाट पानीका थोपाहरु उनको गाला चुम्दै झरिरहेका थिए। पहिला सामान्य लाग्ने उनको अनुहार आज नजिकबाट नियाल्ने मौका पाउदा मलाई सुन्दर लागेको थियो। घरिघरी उनीसंग नजर जुध्थ्यो र उनको गालामा लालिमा फैलन्थ्यो र लाज मिश्रित मुस्कान निस्कन्थ्यो र उनी नजर हटाउथिईन्।उनी मुस्काउदा गालामा खोपिल्टो पर्थ्यो।
“अव एसएलसी पछि के पढ्नुहुन्छ?” उनले सोधेकी थिइन्। मैले खास केही योजना बनाएको थिइन र पारिवारिक आर्थिक अवश्थाले गर्दा धेरै ठूलो सपना पालेको पनि थिईन। सम्पत्तीको नाममा एउता गैरी खेत, एक हल गोरू, केही गाईहरु थिए। बुबा पुरेत्याँई पनि गर्नु हुन्थ्यो र त्यसबाट भएको आम्दानीले परिवार धान्न सहयोग गरेको थियो।
“हाम्रो यहाँ क्याम्पस छैन, कि चितवन जान पर्छ, कि काठमाण्डौ। खर्च धेरै लाग्छ। खै अगाडी के पढ्न सकिएला र?” मैले आफ्नो विवशता ब्यक्त गरेको थिंए।
“त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ ! तपाँई जस्तो राम्रो पढाइ भएको मान्छेले त्यसै छोड्न हुन्छ ? उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक, महाकवि देवकोटाले भन्नु भएकोछ”।
म फिस्स हाँसेको थिंए। तर किन किन उनले मेरो प्रशंसा गरेको मलाई औधी मन परेको थियो। उनको सल्लाहमा आफ्नोपन झल्किएको महसुस भएको थियो।
हामी कुराहरुमा हराउन थालेरहेका रहेछौं। पानी रोकिएको हेक्का नै भएनछ।
“तल को हो बात मारेर बसेको”? माथिबाट घरको आमैले कराएपछि पो हामी झल्याँस्स भएछौं।
“ए पानी त रोकिई सकेछ। जाऔं अब। बुवाले मार्नुहुन्छ, ढिलो भयो।”। उनले आफ्नो पछ्यौरी मिलाउदै भनेकी थिइन्।
किन किन उनीसंग बात मार्दा अति आनंद महशुस भएको थियो। कुनै केटीसंगको यो मेरो पहिलो सामिप्यता थियो। यो पानी अझै परिहेको भए हुन्थ्यो नि भनेजस्तो पनि लागेको थियो। त्यसपछि बाटो लाग्यौं र केही पर पुगे पछि हाम्रो बाटो छुट्टिएको थियो। एउटा नजानिदो आकर्षणले मलाई नैनकला गएको बाटोतिर फर्कि फर्कि हेर्न वाध्य तुल्याएको थियो।
क्रमश: दोश्रो भाग
Posted by Postak Shrestha, Minneapolis, USA at Sunday, August 09, 2009
रमाईलो लाग्यो ! म आफै पानीमा भिजेको त्यो दिनको याद दिलाईदिनु भयो ! तपाईको क्रमश को फलको प्रतिक्षा मा छु !
8/9/09, 9:37 PM
Good starting ! Waiting for more to come !
पोस्तक जि होइन कता हराउनु भएको हो? निकै समय पछि पो देखा पर्नु भो त। झरि त मलाइ पनि मन पर्छ तर हेर्नको लगि मात्र, भिज्न भने डर लाग्छ।
राम्रो छ, बाँकि भागको पर्खाइमा छु।
8/12/09, 9:59 AM
दाई, सुरुवात राम्रो लाग्यो, अर्को भाग को प्रतिक्षा मा छु है म पनि।
8/12/09, 4:02 PM
12/9/09, 5:54 AM